Ukulinganiswa okuphezulu koThoba iipompu zeKhitshi eBrush
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Iphezulu Ikaliwe Tsala ezantsi Iipompo zeKhitshi Ebrashiweyo yeNickel
I-Wowow ephezulu I-Rated Tola i-Faucets yeKhitshi eneBrown iNickel
Oku kunciphisa isitofu ekhitshini kunezi mpawu zilandelayo:
Ukujongana ngokulula namabala ekhitshini, iintlobo ezintathu zamanzi, tshintsha phakathi kweflashhes ngokulula, wandise umpu wamanzi, kwaye uluhlu lokucoca alunamda.
I-10-level electroplating, eqinile kunye ne-kutu-proof, ekumgangatho ophezulu we-ceramic val key, sisitshixo sokuvuza kwamanzi kwetephu. Qalisa ngobumnene, hlamba izandla kunye nemifuno ngaphandle kokuchitheka.
2310101 imiyalelo yokufaka
I-WOWOW faucet ekhitshini ikhupha isitshizi esingu-2310101 ineenzuzo ezinkulu xa kuthelekiswa nabanye abathengisi: ifenitshala yasekhitshini enezinto ezisemgangathweni: ukumatha okucoliweyo (ibrown chrome), ukumelana nezinto ezikrwada, ezilula ukuhlamba; Umxholo walesi siseko: ubhedu olusulungekileyo olusulungekileyo kunye nenqanaba eliphezulu lobhedu, olunamandla, olungakhokeliyo, olunganyamezelekiyo.
Uyilo lwe-Prima kunye nokugcina amanzi: uxinzelelo olukhulu lwefinki ekhitshini yongeza ikhitshi yokumisa iqhosha, inokuthintela amanzi ngalo naliphi na ixesha. (Yenziwe ngezinto eziGqwesileyo eziphezulu kunye neTekhnoloji yeNgcali, ungakhathazeki malunga nokuvuza)
Umncedisi wasekhitshini omkhulu: umxube osinki we-lever yokuxuba usebenzisa isitshizi sokukhupha: I-1.5m yokuqhushumisa-isibonisi se-hose sinika indawo yokuhlamba eyi 85cm; Isikhuselo esijikelezayo: 360 °, ilungile kwisinki ezimbini, kulula ukushenxisa kwisinki enye ukuya koku kulandelayo; Unokonwaba kwikona nganye ekhitshini! Ukudityaniswa kulungelelaniswe namatywina anzima e-ceramic / iidiski kunyamezele ukugqabhuka okuphezulu ngolawulo lobushushu.
Umxhubi weTephu yeTephu yamanzi, Ikhitshi elifudumeleyo kunye nelibandayo: iCartridge eyakhiwe ngobunjineli, enikezela ngolawulo olucothayo noluchanekileyo lokujikeleza kunye nobushushu bamanzi. ; Ukususa amagwebu, kulula ukucoceka okanye ukubuyisela. Ifomathi yokuxuba yamkelekile kwiinkqubo zoxinzelelo oluphezulu / Ayifanisi indlela yoxinzelelo oluphantsi.
Ukufakwa okukhawulezayo: Ngokukhawuleza ngengqondo ekhanyayo, eyilelwe ngokukodwa indawo enomda kunye nama-novices, alula; ukukhwela kuxhonyiwe kwaye akusafuneki i-wrench. Isiqinisekiso semveliso seminyaka emi-5.
I-SKU: 2310101 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Thatha iipompu zekhitshi tags: Uqhekeze uNickel, Iholide elilodwa, spray
21.5 x 11.25 x 3 intshi
I-Nickel ebrashiweyo 101
Yenziwe ngentsimbi eshishini
I-single-Hole okanye i-Three-Hole
Iziko, Ekhohlo, Ekunene